Thumela uhlu lwezixhumanisi zokuma ku-Google Earth, kusuka ku-Excel, ngomfanekiso nombhalo ocebile - iGeofumadas
Thumela uhlu lwezixhumanisi ezindawo ku-Google Earth, kusuka ku-Excel, ngomfanekiso nombhalo ocebile
Mashi, 2012 Ukulanda, -Google Earth / Amamephu
Lesi yisibonelo sendlela i-Excel engakuthumela ngayo okuqukethwe ku-Google Earth. Icala yileli:
Sinohlu lwezixhumanisi ngefomethi yedesimali yendawo (lat / lon). Sifuna ukuthumela kuGoogle Earth, futhi sifuna ukuthi ikhombise ikhodi yephuzu lesithakazelo, umbhalo obhalwe ngokugqamile, umbhalo ochazayo, isithombe sephuzu kanye ne-hyperlink ukuvula ikhasi ku-Intanethi.
Ngaphansi kwalesi sibonelo salokho esikuthemba ukukubonisa uma siqhafaza iphuzu:
Ikhodi ithi: XL-3458
Futhi yilokho esithemba ukukubona:
Indlu kaMnu. Joaquín Gómez Padre, lapho kuqala khona iNational University futhi manje ibuyiselwe njengemyuziyamu evikelwe yiNational Institute of Anthropology
Bheka ikhasi kwi-intanethi
Nakuba ithempulethi izolayishwa, umoya we-athikili ukuchaza ukuthi ungayenza kanjani wena wedwa.
Esikusebenzayo ukwakha amathegi we-html kumakholomu ahlukile ukuze akwazi ukuvumelana: Ikhodi yalokhu kuzoba:
<img src=»http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Casas_actiopan.jpg/800px-Casas_actiopan.jpg»Ububanzi =»144»Ukuphakama =»168«>
<a href=»http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casas_actiopan.jpg«>Bheka ikhasi kwi-intanethi
Wonke amalebula lokho ukukhombisa ukuthi ulayini ohlukile, uvala ngo okulingana ne-Enter.
Ngemuva kwalokho, ilebula ekhombisa ukuthi lo mbhalo ubhalwe ngokugqamile, yebo ukuwuvala ngo
im ibulabula lesithombe, esingaphakathi sinezakhiwo ezifana nobubanzi (ububanzi), ukuphakama (ukuphakama) nesiqondiso lapho isithombe (src)
Ekugcineni kukhona ilebula le-hyperlink, evula nge-
Okumakwe ngombala obomvu kungokwokuqukethwe okungashintsha ngesithombe ngasinye, ngakho-ke sizoba nesithakazelo bese sisishiya emasethini.
Ngaphandle kokubuya okukhulu, ungabona ukuthi umsebenzi we-concatenate uzofingqwa kulokhu okufana nalokhu:
= QAPHELA(,CELDA,,CELDA,,CELDA,<img src=»,CELDA,»Ububanzi =»,CELDA,»Ukuphakama =»,CELDA,«><a href=»,CELDA,«>,CELDA,)
Okusho ukuthi, sizohlala kumakholomu ayi-8 ukugcina yonke idatha esifuna ukuyikhombisa. Noma esimweni salabo abanamalebula asebenzisa uphawu = nezingcaphuno eziphindwe kabili, kuyinkimbinkimbi kithina ngoba ku-Excel owokuqala ukhombisa umsebenzi bese owesibili usetshenziselwa ukuhlukanisa okuqukethwe kombhalo. Lokhu kuxazululwa ngokufaka lokho okuqukethwe kumaseli ahlukene sengathi kungumbhalo.
Okokugcina sinakho lokhu:
Futhi ukuthumela ku-Google Earth ngifake inkinobho edala ifayela. Lapho uveza indlela lapho ifayela likhona negama olilindele ukuba libe nencazelo ye-kml uma kuboniswa iphaneli lesokunxele.
Isifanekiso sinamagundane ngaphezulu kokunyakaziswa kweseli ukuphakamisa ukuthi idatha kufanele ifakwe kanjani. Ngokuvamile, kujwayele ukuba nenkinga lapho ama-macros enganikiwe amandla futhi lapho indlela okwakhiwa ngayo ifayili ingabhalwa.
Lapho sinawo, ungenza usesho ngekhodi ku-sidebar ye-Google Earth, futhi ukuchofoza iphuzu kuboniswa njengoba sasilindele.
Landa isibonelo kml
Kudinga umnikelo ongokomfanekiso wokulanda, ongakwenza ngawo I-paypal noma ikhadi lesikweletu.
Thumela Previous«Langaphambilini Uhlelo lwe-Geographic Information lisebenzisa i-GIS eninginingi
Post Next Amanzi namabalazwe. NgeOkulandelayo »
Izimpendulo ezingama-22 "Thekelisa uhlu lwezixhumanisi zendawo ku-Google Earth, kusuka ku-Excel, ngomfanekiso nombhalo ocebile"
Sengivele ngiyilandile ithempulethi, ngizoyifunda futhi ngizobhala noma yimiphi imibuzo noma ukulungiswa. Ngiyabonga g '
Sawubona, uJoseph Luis.
Angiboni isixhumanisi sokukhokha ngokudluliswa kwebhange. Ngivela e-El Salvador. Ngiyabonga
Ngo-Ephreli, i-2013 ku
Ngangifuna ukuthenga ithempulethi kodwa anginayo ikhadi elifana nami
Bheka, kuphephe kangakanani ukubeka isicelo phezulu? Nasi isibonelo:
Ruben Alfredo uthi:
Landa ifayela le-Excel, futhi nginenkinga yokulayisha izithombe kusuka ku-Disk D: / obras / alc yami, ngicela ungithumele incazelo njengoba ngingakwazi ukulayisha izithombe kusuka kulelo kheli.
Ingabe kuyadingeka ukuthi lezi zithombe zibe nosayizi othize? noma ungasebenzisa izithombe ze-4 mb
Yebo, Yebo ungathola imigwaqo yendawo kwikhompyutha noma kwinethiwekhi
kulinganiselwa ukuthi kungenzeka ukuthi ufunde izithombe ezigcinwe endaweni yePP noma usebenzisa izinkinobho zenethiwekhi. Ngiyabonga
Ingabe lolu hlelo lokusebenza lungakwazi ukufunda izithombe zasendaweni ezilondoloziwe ngaphandle kokusebenzisa i-URL?
oscar melendez uthi:
Sawubona, nginentshisekelo yokuthenga izifanekiso zakho. Ngivela ePeru, kepha uma ngikunikeza isixhumanisi sokudlulisa i-akhawunti yasebhange, angitholi lutho olufana no-Aug ukufaka imali yakho
Siyazisola ngesigameko, kodwa sesiyilungisile futhi uhlelo lokukhokha selivele lunikeziwe.
I-macro ayinayo ikhi yokuvikela, ngakho ingashintshwa.
Ukulanda kuhlanganisa ukukwazi ukuguqula ifayela lomthombo noma i-macro eyinhloko yohlelo ngokuhamba phambili.
Akusikho ukwehluleka kwedatha, ukuthi isithombe se-Google sishiyiwe
DJ Esteban uthi:
Ngempela, i-datum enginakho ku-Google Earth yi-WGS84.
Uthole isizathu sokuhluleka ngedatha yami?
Thumela kubo imeyili ukuze ubabone. Ngithumele itafula ku-Excel nefayela le-kml elikhiqizayo. editor@geofumadas.com
Hlola ukuthi usebenzisa i-Datum efanele, i-Google Earth isebenzisa i-UTM WGS84.
Ngiyabonga ngejubane elikhambi elisebenzile. Kodwa-ke, lapho ngisebenzisa ifayela le- «kml» nge-Google Earth, cishe awekho amaphuzu avumelanayo avela futhi ambalwa kuphela abonakala, cishe njalo i-1º neyokugcina yochungechunge, kepha kude kakhulu nalokho okuhambelana (100 Kms. Pe ). Ngaba nesithukuthezi sokwenza izivivinyo futhi lutho. Ngingakuthumela ifayela nedatha elayishwe kwenye i-imeyili? Ngakho-ke uzobona ukuthi kwenzekani. Ngiyabonga
Lona inkinga eyaziwa, njengoba kubhaliwe ngenhla.
Guqula indlela, ubeka ifayili elizokwakhiwa ngokuqondile ku-C: futhi lokho akuvunyelwe ngamasethingi e-Windows. Sebenzisa enye indlela futhi uqiniseke ukuthi ikhona.
Lolu hlelo lubonakala lukhulu kimi futhi luye lwandibiza kakhulu ukuze ngiluthole.
Ngithole ngokumelene nokukhokha kwe-$ 2 kodwa kuthiwa uma ngiyikhipha ayisebenzi futhi isixwayiso siphume sithi:
'Iphutha' 75 'lenzeke ngesikhathi sokuqalisa.
Iphutha ekutholeni indlela noma ifayela »
Ngingabonga uma ungakwazi ungitshele kanjani ukukulungisa noma uma uthumela kimi elinye ifayela Excel, ngokushesha ngangokunokwenzeka, ngoba nginomhlatshelo ukulungiselela umsebenzi lokumelela amaphuzu yendawo mina ngempela ngasekupheleni.
Uma bemukelwa ngamamitha ambalwa (i-10 ukuya kumamitha we-15) yingoba isithombe se-google sidilizwa, ungasibona siguqula isithombe sibe yiminyaka edlule futhi uzobona ukuthi i-georeference imbi impela. Yize ukuxhumanisa kunembile.
Uma ukuthunyelwa kukhudlwana kunkudlwana, kungenzeka ukuthi zixhumanisa enye i-Datum. I-Google isebenzisa i-WGS84.
Uma izixhumanisi ziwela kwenye indawo yeplanethi, kungenzeka ukuthi ungena kwi-latitude ne-longitude emuva. Noma awusebenzisi isibonakaliso: E-hemisphere esentshonalanga ubude buba nokubi, eningizimu hemisphere iyona engemihle.
Edgar Coronado uthi:
Umnikelo omuhle kakhulu kuphela owaziyo ukuthi lapho ngifaka izixhumanisi zami awungikhombisi ngqo ukuthi ukuphi ... ucabanga ukuthi kuzoba yini?